မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: Memory of Tree Top Walk (video)
Posted by mabaydar at 6:29 PM
တကိုယ်တော် ရုပ်ရှင် ထုတ်လုပ်ရေးမဟုတ်တော့ဘူးနော်.. သရုပ်ဆောင်တွေရော၊ ဒါရိုက်တာရော၊ စတေကင်မရာမင်းရော ခန့်ပြီးပြီပေါ့...
သီချင်းနဲ့ သရုပ်ဆောင်ပုံတွေနဲ့လိုက်ဖက်တယ်.. တခါတလေတော့ မျက်နှာတွေ ၀ါးဝါးနေတယ်...
အင်း Youtube ကိုသွားပြီး.. ဗွီဒီယို လက်ရာအောက်နားလေးမှာ.. watch in High Quality ကို နှိပ်လိုက်ရင် ကြည်ကြည်လင်လင်မြင်ရတယ်လေ.. ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ မကြည်ပဲနေမှာပေါ့.
ကောင်းတယ်ဟေ့၊ နာ မင်ဂလာဆောင်ရင် လာရိုက်ပေး (ဟီး တတို့သားက ဘယ်နေမှန်: သိဝူ:)
1/03/2009 1:28 AM
1/03/2009 2:38 AM
I guess u totally had fun there...=)
1/04/2009 6:19 PM
Thank u mabaydar.
1/04/2009 6:56 PM
ရာဇဝင်ထဲက ဘေဒါရီ လိုခပ်ညံ့ညံ့ ခပ်တုံးတုံး
မိန်းမ ဟုတ်ဘူး ဆိုတဲ့...ဘေဒါရေ..အဲ..ဗေဒါရေ...
ဟီး....ဒါ့ ထက်ကောင်းရင် ပိုကောင်းဦးမယ်..
ပထမစစခြင်း ပြကွက်တွေ ကြည့်လိုက်တာနဲ့ မဗေဒါ ရဲ့ ပိုး ဘယ်လောက်ကြီးတယ် ဆိုတာ သိလိုက်ရတယ်။ နောက်ပြီး ၀ါသနာလဲတူတယ်။ နောက်ဆုံး တစ်ခုက ကျွန်တော် မဗေဒါလောက် လက်စွမ်း မပြနိုင် မလုပ်နိုင်ဘူး ၀န်ခံပါ၇စေ.. ရဲမေ ဆက်လုပ် အစဉ်အား ပေးလျှက်
1/09/2009 12:21 PM
ကျွန်တော့်မှာ High Hills Home Studio (HHHS) က သီချင်းတွေ MTV (အပျော်တမ်း) ရိုက်ဖို့ရှိတယ်။ တယောက်တည်း ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်တာမို့ ၀ိုင်းကူနိုင်ရင် ကူပါဦး။
ကိုလောရှည်ရေ.. ဒီကလဲ ပူးပေါင်းပါဝင်မဲ့ ၀ါသနာတူတွေကို မျှော်နေတာ.. ဘာကူညီပေးရမလဲပြောလေ.. ဒါပေမဲ့ မဗေဒါက ဘာမှတော့ သေချာမတတ်ဘူးနော်.. လေ့လာစဲ ၀ါသနာရှင်သက်သက်ပဲ..
မိုက်တယ်... မိုက်တယ်...အားကျစရာကြီး... ကျွန်တော် စင်္ကာပူ အလည် ရောက်ရင်လည်း မဗေဒါကို မေးရမယ်.. ဘယ်တွေလည်လို့ ရလဲဆိုတာ... အားကိုးတယ်နော်... :P
1/23/2009 4:12 AM